बाबुरामको नयाँ शक्ति ः मीठो विष
१. बाबुराम भट्टराईले ‘नयाँ शक्ति’ नामक पार्टीको पूर्व रुप बनाएर नेपाली राजनीतिको ध्यान आफूतिर तान्न निक्कै ठूलो प्रयत्न गरेका छन् । अहिले बजारमा यही शक्तिको चर्चा केही चलेको छ । पक्ष र विपक्षमा बहस आइरहेका छन् । उता बाबुराम भट्टराई बजारमा आएको नयाँ ब्राण्डको विज्ञापन बडो सतर्कतापूर्वक उद्योगीले गरेजस्तो गरी प्रचार अभियानमा लागेका छन् । विस्तारै पर्दाहरु खुल्दै आएका छन् । रहस्यहरु समाप्त हुने क्रम शुरु भएको छ । नयाँ शक्तिको विचार, राजनीति र संगठन सार्वजनिक भएको छ । यसका नेतागणहरु पनि फुत्तफुत्त निस्किरहेका छन् र यसले पहिलो चरणको आकार ग्रहण गरिसकेको छ । पूरै पार्टीको आकार नलिए तापनि विहानीले दिनको संकेत दिने भने जस्तो यी केही महिनाका गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट बाबुरामको नयाँ दिशा र दशाबारे प्रारम्भिक टिप्पणी गर्न सकिन्छ । पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईका बारेमा अलि बढी विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ । यो काम समयक्रममा भइरहला । अहिले यो सानो प्रारम्भिक टिप्पणीबाट विषय उठान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
२. व्यक्तिगत रुपमा भट्टराई र उनको नयाँ शक्तिबारे परिचर्चा गर्न त्यति ठूलो इच्छा छैन । बाबुराम प्रवृत्तिको छलफल माक्र्सवादी साहित्यमा अत्यन्त दुर्लभ परिघटना भएकाले विषय उठान गर्ने केही समस्याहरु छन् । किनकि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र विशेषगरी नेपालको माओवादी आन्दोलनमा बाबुराम भट्टराई एउटा प्रवृत्ति बोकेका मानिस हुन् । ४० वर्ष माओवादी आन्दोलनमा गुजारेर त्यसको बरिष्ठ नेता, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले एकाएक ती सबै पुरानो सम्बन्ध तोडी नयाँ घरजममा लागेको परिघटनाको अलि गम्भीरतापूर्वक चिरफार गर्नैपर्छ । एमाओवादी परित्याग गरी त्यसभन्दा ‘नरम’ वा ‘गरम’ अर्काे कम्युनिस्ट घटक निर्माण गरेको भए विषय अलि फरक बन्दथ्यो । यहाँ त उनले सम्पूर्ण माक्र्सवादी दर्शनकै परित्याग गरेका छन् । नयाँ दर्शनका आधारमा नयाँ पार्टी बनाएका छन् र सपना बाँडेका छन् । म नयाँ नेपाल बनाउँछु । सुख समृद्धि र सम्पन्नता दिन्छु । यसैको आधारमा उनले दिनरात दौडधुप बढाइरहेका छन् ।
३. नेकपा (एकताकेन्द्र) निर्माण (२०४७) कालबाट बाबुराम भट्टराईको सक्रिय राजनीतिको नयाँ क्रम शुरु हुन्छ । हुन त उनी त्यसभन्दा पहिलादेखि नै चर्चित थिए । कहिल्यै दोस्रो नभएका, एसएलसीमा बोर्डफष्ट भएर पिएचडीसम्म पढेका बाबुराम भारतमा पढ्दापढ्दै संगठित भइसकेका थिए । त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरुको संगठन बनाएर त्यसको संस्थापक अध्यक्षबाट राजनीति शुरु गरे । पछि मोहनविक्रमको पार्टीको सदस्यता लिए र ०४६–०४७ सालको जनआन्दोलनताका ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ को निर्माण र त्यसका प्रवक्ताको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका थिए । तर उनको वास्तविक राजनीतिको गति भने नेकपा (एकताकेन्द्र) बाट बढी चर्चित भयो । यही कालमा उनी संयुक्त जनमोर्चा, नेपालको केन्द्रीय संयोजक भए र देशव्यापी दौडाहमा निस्किए । एकताकेन्द्रको वाह्य खुल्ला मोर्चा भएकाले यसले जनयुद्ध शुरुवात गर्ने प्रचारात्मक तयारीमा राम्रो भूमिका खेल्यो । संसदमा यही मोर्चाले भाग लियो र तेस्रो ठूलो पार्टी बन्यो । यी सबै काममा त्यसका संयोजकका नाताले बाबुराम भट्टराई शिर्ष स्थानमा जोडिने स्वतः भइहाल्दथे । पत्रिकामा नियमित लेख्न रुचाउने र हरेक प्रकरणमा केही न केही टिप्पणी गर्न रुचाउने भएकाले भट्टराईलाई मिडियाले हरदम पिछा गरिरह्यो पनि ।
४. जनयुद्ध कालमा बाबुराम एउटा रहस्यमय मिथक बनिरहे । कतिपयलाई त्यस समय प्रचण्ड भन्ने मान्छे नै छैनन् । बाबुराम नै प्रचण्ड हुन भन्ने लाग्दथ्यो । जनयुद्धका क्रममा रोमाञ्चकारी कारवाही र त्योसँग जोडिएको प्रमुख पात्र बाबुरामको चर्चा शिखरमा चढेको थियो । दोस्रो वार्ताकालमा बाबुराम भट्टराई सार्वजनिक भए र पुनः भूमिगत भए । २०६२–०६३ का जनआन्दोलनको सफलतापश्चात बाबुराम प्रचण्डसँगै सार्वजनिक भए । प्रचण्डसँगै समानान्तर रुपमा उनले आफूलाई अगाडि बढाए ।
५. बाहिर बाबुराम भट्टराई भव्य चुनौतीरहित व्यक्तित्व बनिरहेको थियो तर पार्टीभित्र उनी सधैं विवादित भइरहे । कहिल्यै पनि संस्थापनको राजनीतिमा जोडिन सकेनन् । सँधै एउटा दूरीमा रहिरहे । शान्ति प्रक्रियापश्चात् पार्टी मूलतः बाबुरामकै लाइन अनुसार हिंडिरहे पनि उनी त्यसलाई आफू अनुकूल हिंडाउन भने सक्दैनथे । बाहिर र भित्रको यो चर्काे अन्तरविरोधमा बाबुराम हरदम फसिरहे ।
६. एमाओवादीबाट वैद्य–वादलसहितको ठूलो क्रान्तिकारी समूहको विद्रोहपश्चात् बाबुराम पार्टी आफूअनुकूल हुनेमा विश्वस्त थिए । पढाइमा कहिल्यै दोस्रो नभएका बाबुराम संगठनमा कहिल्यै प्रथम बन्न नपाएको गहिरो पीडाबोधले छटपटाइरहन्थे । उनको यो मनस्थिति बुझेका प्रचण्डले त्यहीअनुसार सँगै हिंडाउने कोसिस पनि गरे । नेतृत्व हस्तान्तरणसम्मको सहमति गरे तर कार्यान्वयनमा कुनै पहलकदमी नदेखेपछि एमाओवादीबाट विरक्तिएर बाहिर निस्कए ।
७. तर यी सबैको पछाडि बाबुराममा विकसित भइरहेको वैचारिक–राजनीतिक कारण नै निर्णायक हो । उनी केही वर्षदेखि माक्र्सवादबाट बाहिर निस्कने जमर्काेमा थिए र त्यसलाई उनले सैद्धान्तीकृत पनि गर्दै गएका थिए ।
८. स्टालिनको पुनर्म“ल्याङ्कन र नयाँ प्रकारको पार्टी र सत्ताको बहसको थालनीबाट बाबुराम माक्र्सवादसँगै सम्बन्धविच्छेदको पहिलो ठूलो जमर्काे गर्दै थिए । पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन वरिपरिबाट बाबुराम मिहिन प्रकारले आफ्ना विचार पार्टीमा घुसाउन खोजिरहेका थिए । रुसको विशिष्ट स्थिति र तात्कालीन भित्री र बाहिरी संघर्षको चपेटामा परी स्टालिनले संचालन गरेको पार्टीका नीति र विचारका विरुद्ध बाबुराम चर्काे रुपमा मैदानमा देखापरे । माओले ७० प्रतिशत सही र ३० प्रतिशत कमीको संश्लेषणभन्दा बढी उनी स्टालिनका ७० प्रतिशत कमजोरी देखाउन उद्यत् बनिरहे । यहीबाट अगाडि बढ्दै लेनिनवादी पार्टीभन्दा बढी बुर्जुवा अराजकतावादी पार्टी निर्माणको पक्षपोषण गरिरहे । नयाँ जनवादी र समाजवादी सत्तामा बहुलवादको वकालत गरी प्रकारान्तरले बाबुरामले जनयुद्धकालमै बुर्जवा सत्ताको महिमामण्डन गरिसकेका थिए ।
९. दोस्रो वार्ताकाल वरिपरि नयाँ जनवादी सत्ताको विकल्प लोकतान्त्रिक सत्ताको उपचरणको व्यवस्थित लाइन पार्टीमा ल्याइसकेका थिए । जनयुद्धको धाराका विरुद्ध आएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बुर्जुवा विचार केही संशोधनसहित पार्टीमा कार्यनीतिका रुपमा घुस्यो । चुनवाङमा जनविद्रोह र नयाँ जनवादी सत्ताको रणनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि यसलाई कार्यनीति बनाउन सकिने मान्यता आयो तर बाबुरामको भित्री आशय कार्यनीति नभएर रणनीति नै रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । प्रचण्ड बढी धरमराहटसहित यस मामिलामा बाबुरामसँगै उभिए र पार्टीको शक्तिसन्तुलन बाबुराम भट्टराईतिर ढल्कियो ।
१०. देशमा गणतन्त्र आएपछि पार्टीमा नयाँ कार्यनीति निर्माणमा तीव्र बहस भयो । वस्तुतः चुनवाङले निर्माण गरेको कार्यनीति मूलत समाप्त भइसकेको थियो तर बाबुरामले खुल्ला र घोषित रुपमा चुनवाङको कार्यनीतिलाई रणनीति बनाइसकेका थिए । खरिपाटीसम्म पुग्दा अगाडि बढ्ने कि यथास्थितिमै बस्नेमा पार्टीमा बाबुरामको यथास्थितिवादी लाइनकै विरुद्ध संघर्ष घनीभूत भयो । यस पछाडि बाबुरामले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रणनीति घोषित रुपमा बनाए । त्यसैलाई संस्थागत गर्न मरिमेटेर लागिपरे । जनमुक्ति सेना विसर्जन, संविधानसम्बन्धी बहस, जमिन फिर्ता आदि इत्यादिका बहस–संघर्ष प्रकारान्तरले बाबुराम भट्टराईकै विचारका विरुद्ध थियो । र, प्रचण्ड बढो नमिठोसँग मूकदर्शक बनिरहे ।
११. देशमा बुर्जुवा संविधान आएपछि बाबुरामका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको उपादेयता समाप्त भइसकेको थियो । प्राप्त बुर्जुवा सत्ताको रक्षा र विकासमै उनको ध्यान जाने नै हुन्थ्यो । केही समय प्रचण्डसहितलाई सहमत गरी यो बाटोमा हिंडाउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरे तर नहुने छाँट देखेपछि त्यसलाई चटक्कै छाडिदिए र आफ्नो असली स्वरुपमा सार्वजनिक भए ।
१२. बाबुराम अहिले जे–जस्तो देखिएका छन्, यो लामो समयदेखि उनमा आएको वैचारिक विचलनकै परिणाम हो । एकै रातमा यस्तो परिवर्तन उनमा आएको होइन । बुर्जुवा सत्ताप्रति अनावश्यक मोह र समाजवादी सत्ताप्रतिको अनावश्यक आलोचनाबाट प्रारम्भ भएको यो विचलन उनको प्रथम हुने मनोविज्ञान, बुर्जुवा संसर्ग, बौद्धिक पृष्ठभूमि र दम्भको विचित्र खिचडीबाट उनी यस प्रकारको पतनको पराकाष्ठामा पुगे । यसैमा उनलाई विभिषण बनाएर माओवादी आन्दोलनका विरुद्ध विषवमन गर्न उद्यत् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बुर्जुवा खेलाडी पनि जोडिएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
१३. अहिले उदारवाद र समाजवाद मिलाउने, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रपतीय प्रणाली आदि जे–जस्ता नारा ल्याएका छन् ती सबै उदार बुर्जुवाकै कार्यक्रम हुन् । वस्तुतः बाबुरामले बुर्जवाहरुको सबैभन्दा आकर्षक नारा लगाइरहेका छन् । सुन्दा राम्रो–मीठो देखिने तर यसको अन्तर्यमा गएर हेर्दा विषसिवाय अरुथोक केही पनि होइन । मीठो तर विष बाबुरामले बेच्न लागिरहेका छन् ।
यो बुर्जुवा विचारमा पूर्व माक्र्सवादीको छलाङको पहिलो पाइला मात्र हो । बाबुराम बुर्जुवा राजनीतिको सबैभन्दा राम्रो ठाउँबाट यात्रा आरम्भ गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् तर उनी त्यहीं टिकिरहन भने सम्भव विल्कुलै छैन ।
१४. अहिले प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको युगका लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता लागू गर्न खोज्नु असम्भवप्रायः नै छ । बौद्धिक बाबुरामले यो कुरा नबुझ्ने कुरै भएन । अहिले साम्राज्यवादको रुपमा बुर्जवा दर्शन र राजनीति नै हावी छ र त्यता हिंडिसकेपछि बाबुरामले त्यसलाई कुनै न कुनै रुपमा नअँगाली सुखै छैन । तसर्थ बाबुरामको स्वाभाविक पतन भनेको साम्राज्यवादका सामु एक गोटीका रुपमा आफू र आफ्नो संगठनलाई आत्मसमर्पण नगराई सुखै छैन । विगतमा विप्पालगायत भारतसँगको उनको सम्बन्धले उनले पकड्ने दिशा धेरै पहिला नै तय भइसकेको देखापर्दछ ।
१५. तसर्थ अहिले बाबुराम मझधारमै खडा भएका छन् । माक्र्सवाद छाडे पनि अझै वैचारिक र राजनीतिक रुपमा जनताको पक्ष छाडिसकेका छैनन् । उनीसँग थुप्रै असहमतिका बाबजुद सहकार्य गर्ने ठाउँमा आफूलाई उभ्याइरहेका छन् । तर यो लामो समय उनले टिकाइराख्न असम्भव नै छ । अन्ततः बाबुराम प्रतिक्रियावादको एउटा वफादार सेवक र उनी स्वयम् पनि प्रतिक्रियावादी बन्ने तीव्र दौडमा बेलगाम दौडिरहेका छन् ।
१६. हामीले अझै बल गर्नैपर्छ । प्रतिक्रियावादीले तान्ने कि जनताले आफ्नो पक्षमा ल्याउने बाबुराम ठीक बीचमा अड्किएका छन् । यसबेला उनलाई प्रतिक्रियावादी कित्तामा धकेल्ने काम गर्न हुन्न । उनको वैचारिक पतनको तीव्र आलोचना र संघर्ष गर्दै तानिरहने प्रयत्न बढाइरहनु पर्दछ । तर मुख्य कुरा आन्तरिक नै प्रधान हुन्छ ।
१७. एउटा माओवादी उच्च नेताको यति तीव्रताका साथ पतन भएको परिघटनाको हामी माओवादीले गम्भीर अध्ययन गर्नै पर्छ । भविष्यमा यस प्रकारका व्यक्तिहरु माओवादी आन्दोलनमा घुस्न सफल नबनुन् । अहिलेदेखि नै बाबुराम प्रवृत्तिसँगको वैचारिक बहसलाई तीखो पार्नु पर्दछ ।
१४ फाल्गुण, ०७२, माओवादी नगर, कृष्णपुर, भरतपुर, चितवन ।